बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ६, २०७८ आइतबार 151
काठमाडौं : स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा बार्सिलोना र एथ्लेटिक बिल्बाओ बराबरीमा रोकिएका छन्। सन मामेस बरिआमा सम्पन्न खेलमा घरेलु टोली बिल्बाओले अग्रता जोगाउन नसक्दा खेल बराबरीमा र रोकिएको हो।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको खेलको दोस्रो हाफमा घरेलु टोलीले अग्रता बनाएको थियो। खेलको ५० औं मिनेटमा इनिगो मार्टिनेजले बिल्बाओलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर, बिल्बाओले अग्रता जोगाउन भने सकेन। खेलको ७५ औं मिनेटमा
बार्सिलोनाका मेम्फिस डीपेको गोलगर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यस्तै खेलको इ’न्ज्युरी समयमा बार्सिलोनाका एरिक गारसिया रेडकार्ड खाँदै बाहिरिएका थिए।त्यस्तै गएराति नै सम्पन्न अन्य खेलहरुमा मालोर्काले अलभेसलाई १-० ले हराउँदा स्पानोयल र भिल्लारियल गोलरहित बराबरीमा रोकिए। त्यस्तै ग्रानडा र भ्यालेन्सिया १-१ को बराबरीमा रोकिए।
Prevआज रक्षा बन्धन, यसरी शुरु भएको थियो रक्षा बन्धनको प्रचलन !
Nextम्यानचेस्टर सिटीकाे सानदार जित !